अध्ययनले भन्छ, मर्निङ वाकभन्दा मर्निङ सेक्स उत्तम – Palika Times
अध्ययनले भन्छ, मर्निङ वाकभन्दा मर्निङ सेक्स उत्तम
४ जेठ, एजेन्सी । सेक्सका लागि सबैभन्दा उत्तम समय कुन हुन सक्छ ? धेरैजसो जोडीको मनमा यो सवाल उठिरहेको हुन्छ । जोडीको इच्छा र उपयुक्त वातावरण मिलेमा सेक्सका लागि कुनै समय कुरिरहनु आवश्यक त छैन तर लामो समयको अनुसन्धानपछि बिहानीपखको सेक्स सबभन्दा उत्तम रहेछ । बिहानको सेक्स मर्निङ वाकभन्दा लाभदायक भएको अब प्रमाणित नै भइसकेको छ ।
शरीरलाई तन्दुस्त बनाउन तथा मोटोपन र अन्य स्वास्थ्य समस्याबाट बच्नका लागि मर्निङ वाक गर्ने आम प्रचलन छ । कतिपय मानिसले मर्निङ वाकसँगै बिहानीपख कसरत पनि गर्छन् । मर्निङ वाक वा कसरत दुवै स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुन्छ तर बढी परिश्रमविना नै स्वास्थ्यलाई फाइदा पुर्याउने अर्को उपायका बारेमा चाहिँ धेरैलाई पत्तो नहुन सक्छ । विज्ञहरूले बिहानीपख सेक्स गर्नु मर्निङ वाक वा व्यायाम गर्नुभन्दा हितकर हुने बताएका छन् । बिहानीपखको सेक्सले शरीरका मांसपेसीलाई तन्दुरुस्त बनाउँछ, रक्तसञ्चार ठीक राख्छ र मुटुलाई समेत स्वस्थ बनाउँछ ।
बिहानीपखको राम्रो ब्रेकफास्टले दिनभर शरीर फुर्तिलो राख्न मद्दत गर्छ भन्ने भनाइ छ । यसलाई यौनक्रियासँग तुलना गर्दै अमेरिकी यौन परामर्शदाता डा. डेभी हरबेनिकले बिहानै गरिने सहवास स्वास्थ्यका लागि सबैभन्दा बढी लाभदायक हुने बताएका छन् । ‘प्रायः मान्छेहरू बिहान खाइने एक कप मीठो चियालाई पनि दिनको राम्रो सुरुवातका रूपमा लिन्छन्,’ डा. डेभीको भनाइ छ– ‘दिनको सुरुवात स्वस्थ यौनक्रियाबाट गर्ने मान्छेको स्वास्थ्य झन् राम्रो हुन्छ ।’ उनका अनुसार उषाकालमा यौनक्रियामा संलग्न हुँदा शरीरबाट निस्किने एक प्रकारको रसायनले मानिसलाई अझ बढी सन्तुष्टि दिन्छ र खुसी बनाउँछ । खुसी मिलेपछि स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने कुरामा दुई मत छैन ।
अर्का अमेरिकी यौन परामर्शदाता जेन ग्रिगर पनि यो कुरामा सहमत छन् । ‘बिहान सबैलाई अन्य काम गर्न हतार हुन्छ’, उनी भन्छन्– ‘यस्तोमा यौनक्रियासमेत छिटछिटो गरिन्छ । यसो गर्नाले शारीरिक गतिविधि बढी तीव्र भएर व्यायामबाट जस्तै फाइदा पाइन्छ ।’
डा. डेभीले आफ्नो अनुसन्धानको पक्षमा वेलफास्ट विश्वविद्यालयको अध्ययनलाई समेत उद्धृत गरेका छन् । उक्त अध्ययनका अनुसार सातामा तीनपटक यौनक्रिया गर्नाले कुनै पनि किसिमको स्ट्रोक हुने खतरा आधा घट्छ । अर्को अध्ययनका आधारमा डेभीले बिहानै यौनक्रियामा लिप्त हुँदा पुरुष र महिला दुवैको प्रजनन क्षमता बढ्ने निष्कर्ष पनि निकालेका छन् ।
मिड डे पत्रिकामा प्रकाशित खबर अनुसार लामो समयको अनुसन्धानद्वारा बिहानको करिब ७ः३० बजेतिर गरिएको सेक्स नै सबै भन्दा उत्तम हुन्छ र तपाईंको दिन स्वस्थ र आनन्द भएर बित्छ । उक्त अनुसन्धान अनुसार बिहान ७ः३० तिरको समयमा वयष्क मानिसको शरीरमा सेक्स हार्मोन अत्यधिक उत्पादन हुन्छ । यति मात्र नभएर बिहान दुवै पार्टनरमा थकान र तनाब समेत टाढा हुन्छ र ताजापन महसुस भएर प्रत्येक अंग संवेदनशील भएको हुन्छ ।
एक अर्को सर्वेक्षण अनुसार महिलाका तुलनामा पुरुषहरू बिहानीपखको सहवास धेरै मन पराउँछन् । प्रायः महिलालाई बिहान उठ्नासाथ सहवासको चाहना कम नै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा पुरुषको प्रेमपूर्ण व्यवहारले महिलालाई मनाउन सक्नुपर्छ । क्यानडाको क्विन्स विश्वविद्यालयका शोधकर्ताहरूले गरेको अध्ययनले बिहानी सेक्सका अरु विभिन्न फाइदा समेत पत्ता लगाएको छ । ती फाइदा निम्नानुसार छन्ः
१) बिहानी सेक्सले माइग्रेन जस्तो टाउको दुख्ने समस्यालाई कम गर्छ ।
२) सेक्सको समयमा एक घण्टामा तीन सय क्यालोरी इनर्जी खर्च हुन्छ, जसका कारण मधुमेह हुने खतरा पनि कम हुन्छ ।
३) बिहानी सेक्सले शरीरमा रक्तसञ्चार सन्तुलित गर्छ र उच्च रक्तचापको खतरा कम गर्छ ।
४) कण्डम नलगाई गरिने सेक्सले मानिसलाई प्रफुल्लित बनाउनुका साथै डिप्रेसनबाट पनि टाढा राख्दछ ।
५) जोर्नी दुख्ने तथा अन्य हाडजन्य रोग पनि बिहानी सेक्सले कम गर्दछ ।
६) बिहानी सेक्सले व्यक्तिमा प्राकृतिक प्रफुल्लता भर्दछ ।
७) सेक्सका क्रममा व्यक्तिमा त्यस्तो हर्मोन निस्कन्छ जसले उसको कपाल समेत चमकदार तथा सिल्की बनाउँछ ।
८) बिहानी सेक्सका क्रममा शरीरमा रोगप्रतिरोधी प्रोटिनको उत्पादन हुन्छ, जसले मानिसको रोगप्रतिरोधी क्षमता बढाउँछ ।
नेता वस्नेतको पहलमा सुर्यविनायक नगरपालिकालाई कोभिड एम्बुलेन्स प्रदान
गोरखाका एक कोरोना संक्रमित शिक्षकको उपचारका क्रममा मृत्युु